Maxuu Madaxweyne Farmaajo kala hadlay guddiga QM u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Somalia? – Hornafrik Media Network
Xog xasaasi ah: Wax ka ogaaw taariikhda Taliyaha cusub ee loo magacaabayo NISA
Erdogan oo shaaciyey in Turkigu bilaabay tijaabinta gantaalihii uu ka iibsaday…
Golaha Shacabka oo maanta codka kalsoonida u qaadaya wasiirrada magacaaban
Maxuu Madaxweyne Farmaajo kala hadlay guddiga QM u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee saaran Somalia?
By Liibaan Nuur	 On Jan 22, 2020
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war kasoo saartay kulan galabta dhex maray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddiga Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee saran Soomaaliya.
Sida lagu sheegay warka Madaxweyne Farmaajo ayaa guddigan la wadaagay warbixin ku saabsan deegaanada dowladdu ay ka xoreysay Alshabaab, kuwa ay heystaan, qorshaha dib u habeynta ciidamada xoogga dalka iyo la dagaalanka fikirka xagjirnimada.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa guddigan kala hadlay inay dib u eegis ku sameeyaan cunaqabateynta hubka ee saran Soomaaliya, iyadoo lagu jaangoynayo taageerada ay u baahanyihiin ciidamada Soomaaliya, sibaa la yiri loo soo afjaro dagaalka lagula jiro kooxaha xagjirka ah ee ka socda dalka.
Halkan Hoose ka aqriso warka ka soo baxay Villa Somalia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Guddiga Qaramada Midoobay ee cunaqabateynta hubka Soomaaliya ayaa la wadaagay warbixin ku saabsan deegaannada Dowladdu ay ka xoreysay argagixisada Alshabaab, qorshaha dib u habeynta Ciidamada Xoogga Dalka iyo dagaalka lagu dabar-gooynayo fikirka xagjirnimada.
0cc1cbd4 14bc 4554 B267 81e5cdb58d99
Guddiga Cunaqabateynta Hubka Soomaaliya
Madaxtooyada oo iska fogeysay hadal ka soo yeeray xubin ka tirsanaa guddiga wadahadalada Somaliya iyo Somaliland
Kaaliyaha xoghayaha arimaha dibadda Mareykanka oo Muqdisho kula kulmay RW Kheyre